Imaaradka Carabta iyo Qatar oo lacag ku kala bixinaya Farmaajo iyo Rooble xili uu khilaaf u dhaxeeyo | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Imaaradka Carabta iyo Qatar oo lacag ku kala bixinaya Farmaajo iyo Rooble...
Imaaradka Carabta iyo Qatar oo lacag ku kala bixinaya Farmaajo iyo Rooble xili uu khilaaf u dhaxeeyo
Dowladaha Imaaradka Carabta iyo Qatar ayaa si weyn isha ugu haya khilaafka culus ee u dhaxeeya madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Farmaajo iyo Ra’isul Wsaare Maxamed Xuseen Rooble.
Dowladda Qatar oo afartii sano ee la soo dhaafay taageereysay Farmaajo iyadoo u wakiilatay Fahad Yaasiin ayaa hadda ka walaacsan kiiska Ikraan Tahliil oo ka soo bilowday NISA kaa oo laga cabsi qabo in saraakiil katirsan madaxtooyada uu ku soo dhamaado.
Dowladda Qatar ayaa sheegtay iney maalaayiin Dollar ku bixineyso sidii kiiskan loo dabooli lahaa waxaana go’aankaas aqbalay Farmaajo oo qoyska gabadha ka dalbaday iney diyo kabadan mid gabar ay qaataan balse aabaha dhalay Ikraan ayaa sheegay in xitaa aysan qaadan doonin Balaayiin Doller.
Qatar ayaa u aragta in kiiska Ikraan uu bohol ku ridayo dowladda ay taageereysay islamarkaana ay dooneysay in markale ay garab istaagto si uu u soo laabto Farmaajo.
Dhanka kale Imaaradka Carabta ayaa si weyn ugu farxay xilka qaadista Fahad Yaasiin agaasimihii NISA kaa oo laf dhuun gashay ku noqday danaha Imaaradka Carabta iyo Sacuudiga afartii sano ee lasoo dhaafay.
Sidoo kale Imaaradka ayaa waxa soo noolaatay rajadii uu ka qabay Soomaaliya maadama uu meesha ka baxay ninkii ay ka cabsida qabeen, waxaana xogo aan helnay ay sheegayaan in Malaayiin Doller ay ku bixineyso sidii lagu ridi lahaa Farmaajo iyo Fahad.
Warqaad ma ogaan cida lacagtaas ay ku dhaceyso iyo kuwa kasoo qaadaya balse waxaa jirta daneyn weyn oo Imaaradka Carabta kala dhaxeysa Mucaaradka Farmaajo.
Imaaradka iyo Sacuudiga ayaa sanadkan la aaminsanyahay iney door weyn ku yeelan doonaan doorashada soo socota maadama tii lasoo dhaafay ay gacanta ugu jirtay dowladda Qatar.
Previous articleWafdi ka socda Qaramada Midoobay oo kulan la qaadanaya Midowga Musharaxiinta+Dhabar jabka Farmajo
Next articleQaban-qaabadii ugu dambeysay ee qabashada doorashada HirShabelle ee Aqalka Sare ayaa haatan ka socota magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe, iyada oo si weyn loo adkeeyey amniga magaaladaasi. Sida uu qorshuhu yahay maanta oo ay tahay 13-ka September ayaa waxaa la dhageysan doonaan khudbadaha musharixiinta isa soo diiwaan-geliyey oo gaaraya illaa 27 musharax. Guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada ee HirShabelle, Axmed Xasan Diini oo ka hadlay diyaar garowga doorashooyinkaas ayaa ugu baaqay xubnaha musharixiinta ah ee isdiiwaan-geliyey inay ilaaliyaan waqtiga loo ballamiyay in ay hortagaan baarlamaanka. Sidoo kale wuxuu sheegay inay haatan si wanaagsan ay wax ku socdaan, isla-markaana hadal jeedinta, kadib ay guda-geli doonaan qabashada doorashada Aqalka Sare. HirShabelle ayaa doorashada ay qabaneyso waxa ay ka duwan tahay doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedyada kale, waxaana tartanka uu yahay mid furan. Kuraasta qaar sidoo kale waxaa ku tartamaya ugu yaraan 3 xubnood, kuwa ugu badan waa lix xubnood, taas oo muujineysa in HirShabelle aysan kuraasta u xiriin dad gaar ah. Si kastaba doorashooyinka Soomaaliya ayaa maraya meel xasaasi ah, iyada oo doorashadan ay ku xigi doonto mida Golaha Shacabka ee Soomaaliya.
Maleeshiyaad hubeysan oo dagaal ku soo furtay Maxbuus ku xirnaa xabsiga Gaalkacyo & Xiisad halkaasi ka jirta
DAAWO:Xildhibaan Fiqi”Farmaajo xilka madaxweyninimo ayaa ku adag waxaana ka codsaneynaa in
Puntland Oo Shaacisay Dad Hor Leh Oo Laga Helay Cudurka COVID-19 & Dhimashada oo koroortay
Vedio:Qoyska Hooyo Kufsi iyo dil aragagax leh loo geestay oo Warbaahinta la hadlay
DHAGEYSO: Xeeladdo looga hortagi karo in ay qarax ka dhacaan Muqdisho oo lasoo bandhigay
Dowladda oo sheegtay in howlgal lagu dilay Saraakiil Shabaab ah
Qoor Qoor oo Magacaabis deg deg ah sameeyay & Wasiir Fiqi oo ka hadlay
Khilaaf cusub oo ka dhex qarxay Madaxweyne Deni iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash